25G Warshad Taxane | Shiinaha Soosaarayaasha Taxanaha 25G, Alaab-qeybiyeyaal
Naga soo wac: + 86-13682786242
155M ~ 6G Taxanaha
100GBASE-LR4 iyo 112GBASE-O ...
25Gb / s SFP28 LR 1310nm 10km DDM DFB LC qalabka wax lagu wareejiyo
Kuwa gudbiya SFP28 waa waxqabad sare, modules waxtar leh oo taageeraya heerka xogta 25Gbps iyo dhererka isku xirka ugu badan ee 10km ee SMF. Waxaa loogu talagalay 25GBASE-LR Ethernet iyo 25.78125 Gb / s hal haad 100GE LR4. Waxay u hoggaansamaan waafaqsan SFF-8402 iyo SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 iyo IEEE 802.3by 25GBASE-LR, FCC 47 CFR Qaybta 15, Fasalka B, Telcordia GR-468-CORE.
25Gb / s SFP28 CWDM 40km DDM EML Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejinta SFP28 waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo xiriiriyeyaasha Ethernet illaa 25.78 Gb / s heerka xogta iyo dhererka xariirka 40KM. Waxay yihiin kuwo waafaqsan SFF-8472, oo la jaan qaadaya SFF-8432 iyo qaybo la dabaqi karo oo ah SFF-8431. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
25Gb / s SFP28 LAN-WDM 10km DDM EML Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
SFP28 LAN-WDM Module oo u hogaansamaya SFF-8431, SFF-8432 iyo IEEE 802.3CC 25GBASE-ER. Hawlaha baaritaanka dhijitaalka ah waxaa lagu heli karaa iyada oo loo marayo 2-silig isdabajoog ah, sida ku cad SFF-8472. Qalabka wax lagu wareejiyo wuxuu ku habboon yahay shuruudaha RoHS.
25Gb / s SFP28 LAN-WDM 40km DDM EML Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
25Gb / s SFP28 SR 850nm 100m DDM VCSEL LC qalabka wax lagu beddelo
Qalabka 'SFP28 transceiver' waa mid aad u kooban isweydaarsiga qalabka wax lagu beddelo ee 'optic transceiver module' 25Gbit / s serial PECL ama xogta korantada ee loo yaqaan 'CML elektronik' oo loo rogo xogta muraayadaha indhaha ee raacsan heerka 25GBASE-SR. Waxaa loogu talagalay shabakadaha aagga kaydinta xawaaraha sare, Kutlada kumbuyuutarka iskutallaabta isku xidha, Dhuumaha xogta xawaaraha sare leh iyo Xiriirka Inter Rack. Waxay waafaqsan yihiin waafaqsan SFF-8431, SFF-8432 iyo IEEE 802.3ae 25GBASE-LR.
Wareejinta SFP28 waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo iskuxirayaasha Ethernet illaa 25.78 Gb / s heerka xogta iyo ilaa 10 km dhererkiisa xiriirinta. Waxay yihiin kuwo waafaqsan SFF-8472, oo la jaan qaadaya SFF-8432 iyo qaybo la dabaqi karo oo ah SFF-8431. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
25Gb / s SFP28 CWDM 10km DDM EML Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejinta SFP28 waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo iskuxirayaasha Ethernet illaa 25.78 Gb / s heerka xogta iyo dhererka iskuxirka 10km. Waxay yihiin kuwo waafaqsan SFF-8472, oo la jaan qaadaya SFF-8432 iyo qaybo la dabaqi karo oo ah SFF-8431. Wareejiyayaasha muraayadaha indhaha waxay u hoggaansamaan shuruudaha RoHS.
Warshadda Addr.: Dabaqa 3-aad, Baloogga 6-aad, Beerta Warshadaha ee Laser, Aag Cusub iyo Teknolojiyad Sare, Magaalada Anshan, Gobolka Liaoning, Shiinaha